नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुग्यो, संक्रमित संख्या ४४४ – News Of Global
नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुग्यो, संक्रमित संख्या ४४४
विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या आधा करोड नाघ्यो, ल्याटिन अमेरिका नयाँ इपिसेन्टर बन्ने खतरामा
News Of Global बिहिबार, जेठ ०८, २०७७
काठमाडौं । रुपन्देहीको मणिग्रामस्थित क्रिमसन अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको पुरुषको मृत्यु भएको छ । यसअघि मिडियामा मृत्युका खबर आउँदा उनी जीवितै भएको अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको उनको बिहीबार विहान मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
यसैगरी प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा उमाशंकर चौधरीले पनि उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरे । उनको बिहान ७ बजे मृत्यु भएको बताएका छन् ।
मृत्यु हुने बिरामी गुल्मीको मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का ४१ वर्षका पुरुष हुन् । शिक्षण पेशामा रहेका उनी बिरामी भएपछि अर्घाखाँचीको एक मेडिकलमा चेकजाँचपछि रुपन्देहीको मणिग्राममा रहेको क्रिमशन अस्पतालमा उपचारत थिए । उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएका कारण अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो । गत जेठ १ गते उनी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए भने २ गते उनको स्वाब परीक्षणमा कोरोना संक्रमण देखिएको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवाले पुष्टि गरेको थियो । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित भएर मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुगेको छ । यसअघि सिन्धुपाल्चोककी एक महिला र बाँकेका एक पुरुषको कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भएको थियो ।
नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित संख्या ४ सय ४४
त्यसैगरी नेपालका कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ४४४ पुगेको छ । वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा भएको परीक्षणमा थप १७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ४४४ पुगेको हो । नयाँ संक्रमित हुनेमा झापामो कचनकलव गाँउपालिका–३, ६ र ८ का १८, १९, २३ र २६ वर्षका दुई–दुईजना, २५, २८, ३०, ३२, ३७ र ४६ वर्षका पुरुष रहेका छन् ।
यस्तै धनकुटाका ३४ वर्षका पुरुष र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका निवासी ५१ वर्षीया महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताएका छन् । संक्रमण पुष्टि भएका सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र सबै स्वाथ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने ४५ जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्।
विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ५० लाख नाघेको छ । संक्रमित संख्या ५० लाखभन्दा माथि पुगेको छ । यसक्रममा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले संक्रमित संख्यामा अमेरिका र युरोपलाई पछि पारेका छन् । रोयटर्समा प्रकाशित समाचारका अनुसार विश्वमा दैनिक कोरोना संक्रमणमा वृद्धि देखिएको छ ।
यसले भाइरस संक्रमण नयाँ चरणमा पुगेको देखाएको छ। फरवरीमा चीनमा धेरै देखिएको भाइरसले त्यसपछि क्रमशः युरोप र अमेरिकामा महामारीको रूपधारण गरेको थियो । हाल यो अवस्था ल्याटिन अमेरिकी देशमा सुरू भएको छ ।
यो साताको सुरूमा रिपोर्ट भएका ९१ हजार केसहरूमा एक तिहाई केस ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा देखिनुले महामारीले नयाँ इपिसेन्टर बनाउने देखाएको छ। यो संक्रमित संख्यामा युरोप र अमेरिकाको हिस्सा भने २० प्रतिशत भन्दा केही बढीमात्र छ।
ल्याटिन अमेरिकी देशमध्ये सबैभन्दा बढी केस ब्राजिलबाट छन्। संक्रमित संख्यामा उसले हालैमात्र जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतलाई उछिनेको छ। हाल ब्राजिल अमेरिका र रसियापछि धेरै कोरोना संक्रमित भएको तेश्रो देश हो। ब्राजिलको दैनिक संक्रमण वृद्धिदर अमेरिकापछि दोश्रोमा छ।
कोरोनाका पहिलो ४१ वटा केसहरू जनवरीको १० मा चीनको वुहानमा पुष्टि भएका थिए। त्यसपछि अप्रिल १ मा यो संख्या १० लाख पुगेको थियो। त्यसपछि प्रत्येक दुई सातामा १० लाख नयाँ संक्रमित थपिएको रोयटर्सले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणले ६ महिनाको अवधिमा गरेको असर गम्भीर फ्लुले एकवर्षको अवधिमा गर्ने असर भन्दा बढी भइसकेको छ। वार्षिकरुपमा ३० देखि ५० लाख मानिसहरू गम्भीर प्रकृतिको फ्लूबाट प्रभावित हुने गरेको अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठनको छ।
कोरोना महामारीका कारण हालसम्म ३ लाख २६ हजारबढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ तर वास्तविक संख्या यो भन्दा अझ धेरै हुनसक्ने अनुमान छ। धेरै देशले अस्पताल बाहिर भएका मृत्युको तथ्यांकलाई समावेश नगरेकाले वास्तविक संख्या भनिएभन्दा बढी हुनसक्ने ठानिएको हो। कोरोनाबाट मृत्यु भएकामध्ये आधाभन्दा बढी संख्या युरोपबाट रहेका छन्।
विश्वमा दैनिकरुपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको भएपनि थुप्रै देशहरूले स्कूल र काम गर्ने ठाउँहरू विस्तारै खोल्न थालेका छन्।
यस्तै अमेरिकामा कोरोनाविरुद्ध मानिसमा गरिएको पहिलो खोप परीक्षणले देखाएको सम्भावनाले बजारमा केही वृद्धि देखिएको रोयटर्सले जनाएको छ।
वैज्ञानिकले बनाउँदै छन् कोरोना भाइरस मार्ने मास्क
कोरोना भाइरस महामारीको यो समयमा मास्क अनिवार्य जस्तै भएको छ । स्वास्थ्यविज्ञले संक्रमणबाट जोगिन र अरुलाई संक्रमण नहोस् भन्नका लागि मास्क लगाउनु पर्ने बताएका छन् । तर मास्क लगाउँदैमा पूर्ण रुपमा सुरक्षित भइन्छ भन्ने छैन । मास्क सही तरिकाले लगाउने र फुकाल्ने तथा निश्चित समयपछि फेर्ने गर्नु पर्छ ।
मास्कको अनिवार्यता थप पुष्टि भएको यो अवस्थामा अमेरिकाका अनुसन्धानकर्ताहरु कोरोना भाइरस मास्कको बाहिरी सतहमा सम्पर्कमा आउने बित्तिकै निष्क्रिय हुने विशेष खालको मास्क बनाउने प्रयासमा जुटेका छन् । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ केन्टुकीका अनुसन्धानकर्ताहरु मास्कको बाहिरी तहलाई भाइरसलाई आक्रमण गरी मार्न सक्ने बनाउने प्रयासमा जुटेका हुन् ।
त्यसका लागि मास्कको बाहिरी तहमा भाइरसलाई मार्न या निष्क्रिय पार्न सक्ने एन्जाइम राख्ने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । सो एन्जाइम सार्स–कोभी–२ कम्पोनेन्टलाई आक्रमण गर्न सक्ने गरी तयार पारिने छ । भाइरस मास्कको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै मर्ने गरी तयार पार्ने प्रयासमा रहेको केन्टुकी विश्वविद्यालयलका अनुसन्धाकर्ता रहेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।
विश्वविद्यालयका केमिकल इन्जिनियरिङ्गका प्राध्यापक दीवाकर भट्टाचार्यले भनेका छन्, ‘नोवेल कोरोना भाइरसले आफूलाई प्रोटिनले घेरेको हुन्छ । मानिसको शरीरमा एकपटक छिरेपछि आफूलाई बिस्तारित गर्छ । हामीले बनाउने मास्कमा प्रोटोलेटिक इन्जाइम हुन्छ, जसले कोरोना भाइरसको बाहिरी घेरामा रहेको प्रोटिनमा आक्रमण गर्छ । प्रोटिनबाट भाइरलाई अलग गरेर मार्छ ।’
सो मास्क बनाउन तथा परीक्षणका लागि ६ महिना लाग्ने प्राध्यापक भट्टाचार्यले बताएका छन् । एन्टिभाइरल फेस मास्कले वरपरको हावामा रहेको भाइरल पार्टिकल्सलाई पनि हटाउने उनले बताएका छन् ।